Qaybaha kala duwan2018-11-19T11:16:39+00:00
Qaybaha kala duwan
Waxaan iibiyaan wax walba oo loo baahan yahay si aad u kala duwan. With a full line of new genuine OEM and aftermarket parts including Farqiga calaamadaha, kiiska kala iibsiga iyo gudbinta parts for Eaton, Fuller, Dana, Spicer, Roadranger, Rockwell, Mack, ZF, iyo Meritor, waxaan ka heli in aad dib u kor iyo ordaya in waqti lahayn. Waxaan bixinaa maraakiibta maalin isku mid ah, dunida oo dhan.
Nala soo xiriir today get your differential parts tomorrow 877-776-4600 ama 407-872-1901!
Pinion Drive Gear: Wareejinaya awood ka driveshaft si marsho giraanta.
Ring Gear: Wareejinaya awood shirkii kiiska kala ah.
Side / Spider Yeelanaya: Ka caawi labada shaag leh si ay si madaxbanaan noqdaan markaad jeestay.
Golaha Case kala duwan: Heysta marsho giraanta iyo waxyaalo kale oo ah in la wado dariiq dhexaad ka gadaal.
dhexaad Housing: jirka Birta in xidhaa oo taageera qaybo ka mid ah shirkii dariiq dhexaad gadaal.
Rear dariiq dhexaad ka fikirtaan: Ball ama rullaluistemadka saa'idka ku haboon u dhexeeya oo ulahooda wareejiya, iyo gudaha guryaha dariiq dhexaad ah.
Rear Drive oo ulahooda wareejiya: fallaadhihii Steel in lagu wareejiyo Xuddunta shirka kala duwan si ay u giraangiraha drive.
Waxaan oolin Eaton, Fuller, Rockwell, Meritor, Spicer (Dana ama TTC), Mack, qaybo Chelsea PTO iyo ZF. Waxaanu sameynaa qaybo ka gaari International, qaybo Ford, waxyaabaha Western Star, Freightliner qaybo ka gaari xamuul ah iyo accessories, qaybo Kenworth iyo accessories iyo qaybo ka gaari Peterbilt iyo accessories, oo ay ku jiraan adag tahay inay helaan qaybo ka bedelka u ah gudbinta, kala duwan, wareejiyo kiiska iyo PTO, diyaar u ah inay markab sida ugu dhaqsaha badan aad na soo wacdo: 877-776-4600 ama 407-872-1901. Waxaan leenahay a bakhaar qaybo ka buuxa, haddii aadan arkin wax, fadlan nala siin call a oo aan kaa caawin doona inaad hesho qaybaha aad u baahan tahay.
Guji si aad u Booqo Our kala Buuggooda Page